MIBVUNZO - SHENZHEN TEYELEEC TECHNOLOGY CO., LTD
Ndezvipi zvigadzirwa zvako zvikuru?
Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezve akasiyana mwenje evhidhiyo senge Aluminium Alloy LED Mwenje, Aluminium Alloy RGB / Ruvara Rakajeka, Mhete Zadza Chiedza, Yakajairwa LED Mwenje uye nezvimwe zvinoenderana.
Isu tinonyanya kugamuchira T / T kubhangi kuendesa, Western Union uye PayPal.
Chii chako chekutumira INCOTERMS?
EXW kana FOB.
Unoedza zvinhu zvako zvese usati waendesa?
Hongu, tichavaedza. Isu takanyatsoongorora maitiro kubva kune yakasvibirira kuenda kune yekuchengetedza zvinhu mudura.
Sei nezve kutumirwa?
Kana iwe uine wako wekumberi kuChina, isu tinotumira zvinhu kukero yako yakatumirwa. Kana iwe usina wako wekumberi, ipapo isu tinotora mutengo wekutumira uye tinoronga izvo kutumira kwako. Isu tinoteedzera yako yekuraira kuraira zvakanyanya.
Hongu, isu tinopa sevhisi kubva kuID dhizaini, R&D, kugadzira uye kutakura. Isu tinotora maOEM uye maODM akaraira futi.
Zvinoenderana, kune mazhinji mamodheru, iyo MOQ ndeye 500-1000pcs.
Kurongedza kwako kwakaita sei?
Ticharongedza zvakanaka chinhu kuti tione kuti hachizokuvara panguva yekutakura kwenguva refu. Uye isu tinoteedzera yako yekupakira kuraira zvakanyanya.
Ndeipi nguva yekutungamira?
Zvinoenderana neodha yako yakawanda, kazhinji zvinotora mazuva 3-5 echidiki odha. ZveOEM odha, zvinotora mazuva makumi maviri nemakumi matatu.
Ndinogona here kuva neyambiro yekuenzanisira?
Hongu, isu tinotakura kunze kwemuenzaniso kwauri kuitira bvunzo uye mhando yekutarisa. Haasi ese sampuro akasununguka, zviri kutaurirana.
Pakubatana kwekutanga, tinonzwa tisina kuchengeteka kubhadhara zvakananga, chii chatinofanira kuita?
Iwe unogona kuisa odha kuburikidza neyedu yepamutemo webhu-chitoro.
Chii chako garandi sevhisi?
Isu tinopa garandi yegore rimwe chete, isu tinoshandura imwe nyowani mushure mekunge tagamuchira zvinhu zvako zvakaremara kana iwe unogona kungoita pfupi vhidhiyo kuratidza kuti haina kukwana uye tobva tatumira nyowani mune yako inotevera odha.